लोकसभामा ‘प्रतिपक्ष नेता’ हाँसिल गर्न कांग्रेसको ‘नयाँ’ रणनीति, के होलान त राहुल गांधी सफल ?  नेपाल भारत‍
लोकसभामा ‘प्रतिपक्ष नेता’ हाँसिल गर्न कांग्रेसको ‘नयाँ’ रणनीति, के होलान त राहुल गांधी सफल ?
नयाँ दिल्ली । कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) का प्रमुख शरद पवार बीच भएको बैठक पछि, राजनैतिक बृत्तमा अटकलहरु काटिन थालिएको छ कि दुई दलहरु विलय हुन सक्छन । तर, दिल्ली र महाराष्ट्रमा दुवै पक्षका नेताहरूले यसबारे सोधिएको प्रश्नमा भने, आपूmहरुलाई यसबारे कुनै जानकारी छैन कि गांधी र पवारको बैठकमा पार्टीहरु विलयका बिषयमा छलफल भएको थियो । यदि दुवै पक्ष विलय भएमा, लोकसभामा कांग्रेस पार्टीले ‘विपक्षी नेता’ को आवश्यक बल पाउनेछ । अहिले लोकसभामा कांग्रेसका ५२ र एनसीपीका पाँच सदस्यहरू छन् । यसो भएमा यो संख्या ५७ हुनेछ र कांग्रेस पार्टीले सदनको विपक्षको नेताको पद पाउनेछ ।
यो उल्लेखनीय छ कि १९८३ मा शरद पवारले कांग्रेसबाट अलग्गिएर काँग्रेस समाजवादी पार्टीको गठन गरेका थिए । तीन वर्षपछि उनले औरंगाबादमा राजिव गांधीको रैलीमा पार्टीलाई विलय गरेका थिए । यस पछि, १९९९ मा शारद पवारले सोनिया गांधी को विदेशी मूल की भएको भन्दै राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) गठन गरे । पछि, कांग्रेस संग उनको सम्बन्ध ठीक भएको थियो । दुवै पक्षहरूले हालैको लोकसभा चुनावमा महाराष्ट्रमा एकता गरे । शरद पवार आफै पनि मनमोहन सिंहको सरकारमा मंत्री थिए ।
पवारले भने कि उनले र गांधीसँग केहि महिना पछि हुने महाराष्ट्रको विधानसभा चुनाव र लामो समयदेखि राज्यमा परेको खडेरीको स्थितिबारे चर्चा भयो । दिल्लीमा पवार र गांधीबीच ५५ मिनेटको बैठक भएको थियो, पछि दुई पक्षबीचको विलयबारे पनि कुरा भएको थियो । यसबारे सोधिएको एक प्रश्नमा एनसीसी प्रवक्ता नवाब मलिकले बताए कि पार्टीमा यसबारे कुनै बहस भएको छैन । अर्कोतर्फ, कांग्रेस कमिटिका प्रदेश अध्यक्ष अशोक चव्हाणले भने, ‘जब दुई दलहरूको नेताहरू भेटिन्छन, तव राजनीतिमा चर्चा हुने गर्छ । यदि दुवै पक्षहरू एउटै भएर सँगै आउँछन् भने, यसले मतदाताको विभाजनलाई रोक्न मद्दत गर्नेछ । तर मलाई दुई पक्षहरूको विलयको बारेमा कुनै जानकारी छैन ।’